केटाकेटी आए, गुलेलि चलाए, मट्याङ्ग्राको नास -पुर्ण भुजेल «
केटाकेटी आए, गुलेलि चलाए, मट्याङ्ग्राको नास -पुर्ण भुजेल
प्रकाशित मिति : 18 December, 2019 11:51 am
काठमाडौं । राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका नेताहरुले संगठनका असहमति मिडियामा सार्वजनिक गरेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन् । राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको सह-संयोजक रमेशकुमार पौडेलले एक अन्तर्वार्तामा संयोजक रामप्रसाद सापकोटा `दिपशिखा´ले माफी नमागे गम्भीर समस्या सिर्जना हुने जनाएको भन्दै विरोध सुरु भएको हो ।
नेकपा माओबादी केन्द्र र नेकपा एमाले पार्टिको एकता भए पछि वाईसीएल नेपाल र युवा संघ नेपाल दुबै संगठनको एकता भैसकेपछी हस्ताक्षर संयोजकले मात्र गर्ने प्रचलन बिगतदेखी चल्दै आएको छ । यो विधि सबै राजनीतिक संगठनहरुले (यहि बिधी)लागु गर्दै आएको कुरा शतप्रतिशत सत्य हो । हाम्रो पार्टीमा समान दुई अध्यक्ष हुनुहुन्छ दुई जनाको हस्ताक्षर चल्छ याे पनि सत्य हो । आजकाल कहिलेकाही कार्यकारी अध्यक्षले मात्र पनि गर्नुहुन्छ याे पनि सत्य हो ।
सायद, जनवर्गिय संगठनको एकताले दुई अध्यक्ष राखेन त्यसकारण एक संगठन दुई हस्ताक्षर वा निर्देशन काहिं हुँदैन याे नै सहि सत्य हो । यसमा मैले देखेको र मेराे बुझाईमा लेनिनवादी संगठन पद्धति र नियमत : सह-संयाेजकले पद सम्हालिरहेको ब्यक्तिले यसरी बोल्नु र बिषयलाई सामुहिकता भन्दा वा संगठन भन्दा बाहिर गएर बकवास गर्ने छुट कसैलाई छैन ।
बिषय जे भएपनि संगनठकाे प्रकृया जान्नु पदैन ? संगठन भित्र आन्तरिक रुपमा छलफल गरि समाधान खोज्नु पदैन ? यसरी आम कार्यकर्तालाई भ्रमित पार्ने मनशायले बोल्न छुट कसैलाई छैन । नेकपाकाे एक जिम्मेवार सदस्य हुनुको नाताले कसैलाई छुट हुदैन ।
आफूलाई जिम्मेवारी बारे ख्याल वा जानकारि छैन ? आफ्नो हसियत बारे ख्याल छैन ? केटाकेटी आए गुलेलि चलाए मट्याङ्ग्राको नास भनेको यही हो । संगठन एकता गर्दा किन सह संयाेजककाे पदभार ग्रहण गरेको/ जिम्मेवारी लिएको त ! भुमिका र हैसियत थाहा थिएन ?
याे रास्ट्रिय संगठन मनाेगत मनाेमानि ढंगले चलने संगठन होइन । नीति, सिद्धान्त, विचार र कमान्डरकाे कमान्ड कन्ट्रोल र संगठनकाे नियम निन्त्रणमा चल्छ, चलाउनुपर्छ । न कि कसैको सनक र व्यक्तिकाे लहडमा चल्छ ? आत्म केन्द्रित, व्यक्ती केन्द्रित बाल हठ,अहमता देखाई अमर्यादित बन्ने याे हर्कत देखा परेको छ । याे हर्कत कदापि मान्य हुने छैन ।
सह-संयोजक स्वयं द्वारा नै संगठनको भावना विपरीत जे हर्कत देखाएको छ उहाँले (सह संजकले) सामुहिक रुपमा गल्ती सच्याउने प्रतिबद्धता सहित माफी माग्नु पर्छ।संगठन माथि आँच आउने काम गरेकोले बिधि पद्धति विपरीत क्षमा याेग्य हुने छैन, आत्म आलोचना गरि युवाहरु माझ माफि माग्नु पर्दैन ? बिषय जे भएपनि संगनठकाे प्रकृया जान्नु पदैन ? संगठन भित्र आन्तरिक रुपमा छलफल गरि समाधान खोज्नु पदैन ? यसरी आम कार्यकर्तालाई भ्रमित पार्ने मनशायले बोल्न छुट कसैलाई छैन । नेकपाकाे एक जिम्मेवार सदस्य हुनुको नाताले कसैलाई छुट हुदैन ।